တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီးမငျးအောငျလှိုငျ အိန်ဒိယသမ်မတနိုငျငံ ဝနျကွီးခြုပျ H.E.Mr. Narendra Damodardas Modi အား ဂါရဝပွုတှဆေုံ့(ရုပျသံသတငျး) » ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံ ၀န်ကြီးချုပ် H.E.Mr. Narendra Damodardas Modi အား ဂါရ၀ပြုတွေ့ဆုံ၊ အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံ အမျိုးသား လုံခြုံရေးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်၊ ဒုတိယကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး၊ အိန္ဒိယတပ်မတော် ကြည်းတပ်ဦးစီးချုပ်၊ ရေတပ်ဦးစီးချုပ်တို့အား တွေ့ဆုံဆွေးနွေး၊
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်အား အိန္ဒိယတပ်မတော် (ကြည်း၊ရေ၊လေ) ဦးစီးချုပ်များကော် မတီဥက္ကဋ္ဌ အိန္ဒိယလေတပ်ဦးစီးချုပ် Air Chief Marshal Birender Singh Dhanoa က ဂုဏ်ပြုကြိုဆို၊ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး၊
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သော မြန်မာ့တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ အဂ္ဂရာမြို့ရှိ တာ့ဂ်ျမဟာဂူဗိမာန်(Taj Mahal)၊ အဂ္ဂရာခံတပ် (Agra Fort)နှင့် အဂ္ဂရာလေတပ်စခန်း Air Force Station (Agra)များသို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာ၊
အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံသို့ ချစ်ကြည်ရေးခရီးရောက်ရှိနေသော တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် နယူးဒေလီမြို့ရှိ သံရုံး၊ စစ်သံရုံး မိသားစုများနှင့် သင်တန်းသားများအား တွေ့ဆုံအမှာ စကားပြောကြား